Faka iimilo ezintsonkothileyo zejiyometri kudonga lwendawo yoDonga loMkhathi | I-Androidsis
Udonga lwasemajukujukwini ngumzobo opholileyo onokulingana iziqwenga zejiyometri
I-Space Wall iza ezandleni zethu njengephazili yokuphumla ngesimbo sokubonakalayo esimiselwe kakuhle kwityhubhu. Idlala endaweni yayo ukuba ikhuphe isandi esivumela ukuba siphumle kwaye sijikeleze iimilo zejiyometri de sifumane eyona ndawo siyifaneleyo.
Ngala makhenikhi sijamelene nomdlalo othile kwaye iba yinto eqhelekileyo kwezi ntsuku zishushu neeholide. Jikelezisa iziqwenga kude ufumane indawo ngqo kwisihloko esime siphumelele ekuzalisekisweni kobuchwephesha kunye nomxholo ukuze uvule ngohlobo lwezinto ezenziwe kunye namanye amazwe.
1 Jikelezisa iimilo zejiyometri kwiPuzzle yoDonga lwendawo
2 Iimpawu ezintsonkothileyo zejiyometri ukuwela udonga lwendawo
3 Ubomi obuthathu kuDonga lwendawo
Jikelezisa iimilo zejiyometri kwiPuzzle yoDonga lwendawo
I-Space Wall isisa kuzo zonke iintlobo zeemilo zejiyometri ukuya zibenze balingane ngomngxunya wolo donga lwesithuba ngubani ozokuma phambi kwethu asicel 'umngeni. Siza kuba nothotho lwemizuzwana ukuguqula nganye yeemilo zejiyometri esinazo ezandleni zethu.
Yiyo i-quirk kumdlalo wokudlala weSithuba soDonga uya kusenza sidlule phambi kwazo zonke ezo ndonga ngemingxunya yayo eyahlukeneyo, okanye ukuba siyangqubana xa singenabuchule ngokwaneleyo ukufumana eyona ndawo sihlala kuyo lo mzobo. Ikwadlala ngokuchasene nathi kunye nekhawuntara yemizuzwana eya kuthi ibenako ukusenza uxinzelelo kancinci xa sibona ukuba imilo yethu yejiyometri imalunga nokuziphosa ibhekise eludongeni lwendawo.
Iphazili elinzima elibizwa ngokuba luDonga lwendawo apho sineendlela ezimbini, olunye uhlobo lwebali kunye nolunye ngokungacwangciswanga. Sincoma ukuba uqale kweyokuqala ukuze uqhelane nomdlalo wokudlala, ukuze ekugqibeleni uzame enye engahleliwe kunye nalawo manani antsonkothileyo ejometri.
Iimpawu ezintsonkothileyo zejiyometri ukuwela udonga lwendawo
Ukuntsokotha kwamanani ejiyometri, njengomngxunya esinawo kudonga lwendawo, kuya kuba bubunzima bomdlalo ngokwawo. Kananjalo nokukwazi kwethu ukujika lo mzobo kwaye sikwazi ukucinga ukuba uyakugqitha emngxunyeni oseludongeni. Ngamanye amaxesha kuya kufuneka sizame ithamsanqa, kuba amanye amanani aba nzima njengoko enziwe ngenani elikhulu leetyhubhu.
Umdla onomdla kakhulu osikhuthaza ukuba siqhubeke nokudlala ukubonisa ukuba siyakwazi igqithe imihlaba eli-10 esinayo kuDonga lwasemajukujukwini. Umoya owenziwe ngesandi somculo kunye nezo ndawo zinento efanayo nemvelaphi yeTron movie nayo ibalwa endaweni yayo.
Iphazili elisinyanzela ukuba sisebenzise ukucinga kwaye usebenzise nokucinga okungabonakaliyo ukuze ukwazi ukoyisa amanye amazwe. Le yenye yezinto ezikhethekileyo kuDonga lwendawo njengepuzzle ekumgangatho ophezulu egqibeleleyo yokuthatha izinto ebomini ngendlela ekhululekile.
Ubomi obuthathu kuDonga lwendawo
Ewe ungalahl 'ithemba phambi kwehlabathi, kuba Uya kuba nobomi abathathu ngaphambi kokuba uqale kwakhona. Sinokusebenzisa uphuculo olwahlukileyo kunye nemali yomdlalo kwaye ukhethe ukufumana ubume obutsha bamanani ejiyometri. Kananjalo imihlaba eyahlukeneyo iya kubeka isandi kwiithoni zemibala eyahlukeneyo ukongeza amava aseti kuyo yonke iseti yomdlalo wokuphumla ngenxa yesandi sayo.
Ngale nto siyitsho ngoDonga lwendawo kungcono ukusebenzisa ii-headphone ukonwabela amava esandi esikunika wona. Kwicandelo lobuchwephesha, liyabonakala ngeendawo zejiyometri ezikwaziyo ukusisa kwezazo «ubukhulu» kunye nobunzima obonyusa ngokulinganayo ukuze sihlale sibambekile, kumdlalo esinayo simahla kwiVenkile yeGoogle Play.
I-Space Wall iza kwiVenkile yokudlala ngomsebenzi wesikolo owenziwe kakuhle, ukulungele ukuba iphazili ukufumanisa kwaye uphumze ingqondo yakho ngelixa ususa ezo zijekulo ukuze ujikeleze amanani ahlukeneyo kunye nobunzima bejometri. Ii-headphone, iselfowuni kunye nehammock elunxwemeni okanye echibini, kwaye ube nexesha elimnandi ngeSpace Wall.
Iphazili engaqhelekanga nenomdla
Iya isiba nzima
Ukwahluka okuninzi kwihlabathi
Umthuthukisi: ZPLAY Imidlalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Udonga lwasemajukujukwini ngumzobo opholileyo onokulingana iziqwenga zejiyometri
Ipie ye-Android 9.0 ilapha: Fumanisa zonke iinkcukacha